ओप शप डोनेस गाइड | पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन
तपाईं के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ र मेलबर्नमा पारिवारिक जीवनको पसलमा दान गर्न सक्नुहुन्न? हाम्रो दान गाईडमा तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारीहरू छन्।
जसरी हामी COVID- सुरक्षित प्रतिबन्धहरुमा र अनुदान प्रक्रियालाई कम गर्ने कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको साथ संचालन गरिरहेका छौं, हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि तपाईको स्थानीय भण्डारमा कल गर्नुहोस् कि यो सुनिश्चित गर्न कि हाम्रो स्टोर संगरोध क्षेत्र भित्र तपाईंको दान स्वीकार्न खाली ठाउँ छ।
धन्यबाद तपाईको पारिवारिक जीवन छनौट गर्न को लागी धन्यवाद तपाईंको preloved गुणवत्ता आइटम दान। निम्नलिखित जानकारीले तपाईंलाई कसरी र कहाँ दान गर्न सक्दछ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि कुन औंलाको सामान्य नियम उपयुक्त छ आफैलाई सोध्नुहोस् - "के म यो साथी वा नातेदारलाई दिनेछु?" वा "के म यसको लागि पैसा तिर्न सक्छु?"। तपाईं जस्ता व्यक्तिहरूको उदारताको माध्यमबाट, पारिवारिक जीवनले परिवार, बालबालिका र युवाहरूलाई मेलबोर्नको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रभरि समर्थन गर्न सक्षम छ। सबै आयहरू स्थानीय रहन, स्थानीय समुदायलाई समर्थन गर्दै।
पारिवारिक जीवनको पसललाई सिधा दान दिनुहोस् जुन तपाईले झोलामा राख्न सक्नुहुन्छ र बोक्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि कपडा, जुत्ता, ब्रिक, ब्राक, खेलौना, किताब र साना फर्नीचर आदि। कृपया पसल खुल्ने घण्टा मात्र दान गर्नुहोस्। हाम्रो स्टोर स्थानहरू हेर्नुहोस्।
पारिवारिक जीवन को पिक-अप सेवा ठूला वस्तुहरूको लागि उपलब्ध छ। ग्राहकहरू त्यसपछि हाम्रो love मनपर्दो पसलहरू जहिले पनि कपडा, फर्नीचर र BricABrac का साना सामानहरू दान गर्न स्वागत गर्दछन्। कृपया हाम्रो गोदाम कल गर्नुहोस् 03 9555 2174 एक पिक अप को व्यवस्था गर्न।
हामी सबै लिन सक्दैनौं
यो चन्दालाई "धन्यवाद" भन्न गाह्रो छ तथापि हामीले कानुनी आवश्यकताको कारणले केही वस्तुहरू अस्वीकार गर्न आवश्यक छ, वा किनभने वस्तु अति ठूलो वा धेरै ठूलो छ वा आइटम अस्वीकार गर्नुपर्दछ किनकि यसले परिवहनका लागि अधिक लागत, हाम्रो Op Shops मा बेच्न सकिन्छ भन्दा मर्मत वा नवीकरण गर्नुहोस्। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने कृपया हाम्रो गोदाम कल गर्नुहोस् 03 9555 2174। हाम्रो कर्मचारीहरु तपाईको आईटमहरु को अधिक विस्तार मा छलफल गर्न को लागी सक्षम हुनेछ।
आइटम हामी लिन सक्दैनौं बेबी फर्नीचर, गद्दा, ठूलो वा अत्यन्त भारी फर्नीचर को टुक्रा, प्रयोग गरिएको कालीन, र निर्माण सामग्री। कृपया जब तपाईले आइटमहरू दान गर्न तयारी गर्नुहुन्छ यो दिमागमा राख्नुहोस्।
भोजन तालिका सुइटहरू
मनोरन्जन एकाई र साइडबोर्डहरू
डेस्क (१.२ मिटर चौडा र १.1.2 मीटर लम्बाई)
भाँडा र प्यानहरू
Bric-a-brac (उदाहरण: मैनबत्ती होल्डरहरू, प्लेटहरू, घडीहरू, फोटो फ्रेम्स)
मिडिया र इलेक्ट्रिकल सामानहरू
भान्सा उपकरण (केटल्स, मिक्सर, टोस्टर)
मनोरन्जन प्रणाली (डीभीडी, भिडियो, रेकर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर)
भ्याकुम सफा गर्ने
फ्यान र हीटर